Guddoomiye Ku-xigeenka Baarlamanka Kenya oo Somaliland u soo jeediyey talooyin ku saabsan Shirka Taleex iyo dagaalk Buuhoodle | Berberanews.com
Home WARARKA Guddoomiye Ku-xigeenka Baarlamanka Kenya oo Somaliland u soo jeediyey talooyin ku saabsan...
Guddoomiye Ku-xigeenka Baarlamanka Kenya oo Somaliland u soo jeediyey talooyin ku saabsan Shirka Taleex iyo dagaalk Buuhoodle
Hargeysa-(Berberanews)- Guddoomiye Ku-xigeenka Baarlamanka dawladda Kenya Faarax Macallin oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Soomaalida dalkaas, ayaa dawladda Somaliland ugu baaqay inay joojiso dagaalka ay deegaannada Buuhoodle ka bilawday, isla markaana waxa la isku hayo wadahadal iyo degganaansho lagu dhammeeyo.
Md. Faarax Macallin oo maanta Safar gaar ah ku yimi Caasimadda Somaliland ee Hargeysa, ayaa sheegay in ujeeddada socdaalkiisu tahay inuu wadahada la yeesho Madaxda dawladda Somaliland, islamarkaana wixii uu ku kordhin karo isu soo dhawayn ka galo dhinacyada Shirka Taleex hoggaaminaya iyo dawladda Somaliland. Isaga oo xusay inaanay Soomaalidu kala maarmi karin meel kasta oo ay adduunka ka joogto.
Faarax Macallin oo maanta markii uu soo gaadhay madaarka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha ugu warramay Weriyeyaasha, waxa uu yidhi; isaga oo sharraxaya safarkiisa; “Anigu waxaan u socddaa wixii guud ee Somali oo dhan nabadeedda iyo horumarkeedda sidii xal loogu heli lahaa oo aan ahayn gacan qaad, looguna gaadhi lahaa, waxyaabahaas oo dhan hab xasiloon. Anigu ma aaminsani marnaba in ay somali isku gacan qaado meel kasta oo ay joogto, taasina waxa weeyaan mid aan dawladdana u sheegayo shacabka soomaaliyeedna u sheegayo, wax alaalle wixii dhibaato ah oo jirra wax weeyaan waxa la joogaa wakhtigii xal lagu dhamayn lahaa.”
Guddoomiye Ku-xigeenka Baarlamanka Kenaya Faarax Macallin oo dawladda Somaliland la hadlayaa waxa uu yidhi; “Dawladdu in ay isticmaasho wax la yidhaado degnaasho, xasilnooni iyo tartiib, ilayn dhaqan soomaali ayaynu iska lee nahay . Dawladduna waa in ay ka waantyowdo kana talaabsato gacan qaadka, waayo dadku waa walaalo khaastan soomaalidu meel kasta oo ay joogtana maanta dhulka ayay taalaa markaa haday dhulka taallo dan ayaa inoogu jirta inaga oo dhanba inaan walaalnimo kuwadda hadlno meel kasta oo aynu joognoba.”
Faarax Macallin waxa uu sheegay inuu socdaalkiisu ku arooro qiimayn kooban oo uu doonayo inuu Somaliland ku sameeyo iyo wadahadallo uu sheegay inuu la yeelan doono madaxda dalka.
Previous articleWasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland oo daboolka ka qaaday inay Qaramada Midoobay ka soo horjeeddo go’aannada ka soo baxay Shirka Taleex
Next articleSuuriya oo ku gacansaydhay Qorshe dalalka Carbeed damacsanyihiin inay Ciidammo ugu diraan